Tag: na-ekwu okwu | Martech Zone
Tag: na-ekwu okwu
You na-enweta ndụmọdụ ọjọọ site na ndị na-eduzi ahịa?
O nwere ike bụrụ na m nọ n’ahịa egwuregwu ogologo oge. Ọ dị ka oge m na-etinye na ụlọ ọrụ a, ọ bụ mmadụ ole na ole m na-asọpụrụ ma ọ bụ na-ege ntị. Nke a apụtaghị na enweghị m ndị ahụ m na-asọpụrụ, ọ bụ naanị na ọtụtụ ndị na-ejide ọkụ na-akụda m mmụọ. Kpachara anya maka ndị amụma ụgha, ndị na-abịakwute gị na uwe atụrụ, mana n'ime ha bụ nkịta ọhịa agụụ na-agụ. Matt. 7:15 E nwere ihe ole na ole kpatara…
A na-enye gị mmata, Authority na-ewere ikike
Izu a, enwere m mkparịta ụka dị ịtụnanya na otu onye ọrụ ibe m na-eto eto na ụlọ ọrụ ahịa. Obi gbawara onye ahụ. Ha bụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ na ọtụtụ afọ nke ịrịba pụta. Agbanyeghị, a na-eleghara ha anya ma ọ bụrụ ohere ikwu okwu, ndụmọdụ, ma ọ bụ nlebara anya sitere n'aka ndị ndu. Na 40 afọ, ikike m bịara n'oge na-adịghị anya karịa ọtụtụ ndị isi a ma ama n'ime ahịa ahịa. Ihe kpatara ya bu ihe di nfe - A bu m
Atụmatụ 9 maka formepụta Ihe ngosi PowerPoint dị irè
Tọzdee, Machị 17, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ana m akwadebe maka ngosi m na-eme ihe dịka izu asaa site ugbu a. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-ekwu okwu m maara ga-ekwughachi otu ihe ngosi ahụ ugboro ugboro, okwu m na-adịkarị ka ọ dị oke mma mgbe m na-akwadebe, hazie, na-eme ma zuo oke ha ogologo oge tupu ihe omume ahụ. Ebumnuche m abughi ịkọwa ihe dị na ihuenyo ahụ, ọ bụ ịdebe ihe ngosi dị egwu na-arụ ọrụ na okwu ahụ. Nke a na - eme ka cognition na ebe nchekwa dị elu. Ebe ọ bụ na ọ fọrọ nke nta
Nzọụkwụ 12 iji wulite andchọ Demlọ Ọrụ Ọhụrụ Gị
Tọzdee, Eprel 2, 2015 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu gara aga bụ izu dị ịtụnanya na Social Media Marketing World ebe m kwuru banyere isiokwu nke luzụ ahịa Mgbasa. Ọ bụ ezie na ndị na-ege ntị na-abụkarị ụlọ ọrụ na-achọ ndụmọdụ maka otu esi etinye n'ọrụ na atụmatụ nke ọma, alaghachiri m n'ụlọ wee nwee ezigbo ajụjụ n'aka otu n'ime ndị bịara ya chọrọ ịmata etu m siri wuo mmetụta zuru oke ma chọọ ịmalite ụlọ ọrụ nke m. Achọrọ m ịma ka m ga - esi nweta ndị ahịa (nke ahụ
Wednesday, April 10, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Kedu izu dị ịtụnanya nke a nọrọ na Social Media Marketing World! M na-ahazi Justin Levy na Waynette Tubbs nnọkọ na ntanetị. Justin na-eduzi ụgwọ na Citrix maka atụmatụ mmekọrịta ha na mmekọrịta ha, Waynette na-eduzi enyemaka nke mbọ atụmatụ SAS. Abụọ dị ịtụnanya ndị mmadụ na-agba nnukwu usoro rụọ ọrụ nke ọma ma rụọ ọrụ. Ebe ọ bụ na m moderated, m nwere na-agbachi nkịtị na-arapara n'ajụjụ na-enyocha ndị azum na
Verizon: Biko Kwụsị Ara ahụ
Monday, April 21, 2008 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Enwetara m ozi ederede site na Verizon taa: VZW Msg efu. Ikuku Verizon na-enye nkwalite ngwanrọ vidiyo nke V. Iji kwalite ma mekwawanye ahụmịhe onye ọrụ vidiyo VCAST gị nke ukwuu, gaa nweta ya ugbu a -> Get PIX & FLIX–> Get PIX New -> Get New App -> Entertainment -> V CAST -> FREE Upgrade. Iji pụọ na msgs n'ọdịnihu, zaghachi na 'X'. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-agụta, nke ahụ bụ usoro nzọụkwụ 7
Mgbaghara m na-arịọ ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m na Chicago
Tuesday, October 2, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Bụ na-esonye na Marketing Ọkachamara B2B Marketing ogbako bụ nrọ-emezu! Ihe ngosi m dị mma ma debe ọnụ ụlọ m na Renaissance. Enwego m ụfọdụ kaadị azụmaahịa emere maka mmemme ahụ! Enweghị m ike ichere izute netwọkụ mebere m toro n'afọ gara aga. M nwere na-arụ ọrụ Monday na m atụmatụ bụ ụgbọala elu mgbede Monday na zuru ike maka taa nnọkọ, na-eweta